Mavesatra sy sarotra entina ny fijalianao | Fondation des Choisis de Jésus
Mavesatra sy sarotra entina ny fijalianao
3A_26: Anaka, isaky ny mahatsapa ianao fa mavesatra sy sarotra entina ny fijalianao, dia avia miantsapaza eo an-trotroiko. Atolory Ahy ny fijalianao dia ho tsapanao fa maivana ny entako. Aza manana ahiahy fa efa henoko ireo vavakao sy ireo fitarainanao. Nahita sitraka teo imasoko ianao. Mirehi-pitiavana ho anao ny Foko.